what is mi cloud? « XMS-MMF
By Tin Htay Ag on Monday, July 27, 2015 at 12:12am
what is mi cloud, how to use mi cloud very well..
အရငျက ဒီတိုငျး ပို့ဈလေးပဲ တငျပေးလိုကျပီး အောကျရောကျသှားတာရော နှဈပတျလညျတော့ ပွနျမရှာဖွဈတော့တာရော.. အားလညျး အားနတောရော ပေါငျးလို့ လြှာနညျးနညျးရှညျလိုကျပါတယျ....mi cloud ဆိုတာဘာလဲလို့ မေးရငျတော့ မိမိသိမျးထားခငျြတဲ့contact,sms,photo,call log,note,w-lan,recoder,browser history,music,download appsbackup Home screen layout andfind my device စတာတှကေို သိမျးလို့ မှတျထားလို့ရတဲ့ နရောတဈခုပေါ့… အဲဒီ့ထဲမှာ သိမျးဖို့ သငျ့မှာ ဘာတှလေိုအပျပါသလဲ?????ဘာတှလေိုအပျလဲ ရှငျးပါတယျ.အငျတာနကျ ကှနျနကျရှငျရယျမီအကောငျ့ရယျဒီနှဈခုရှိရငျ သုံးလို့ရပါပီ…MI CLOUDmi cloude ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှထေဲမှာ ကြှနျတျောကွိုကျတာ ၂ခကျြရှိပါတယျ…၁။ wireless lan…… ကိုယျ့ဖုနျးထဲကို ထညျ့ထားသော wifi မှနျသမြှကို ဒါလေးသာ အှနျထားလိုကျ ဘယျအခြိနျ ပွနျဖှငျ့ဖှငျ့ password ပွနျ မတောငျးတော့ပါဘူး… factory restart ခလြညျး မပြောကျပါဘူး…(ကိုယျတိုငျစမျးသပျပီး)၂။ download apps ကို save လုပျထားလို့ရလို့ပါ…..စစခငျြး အသုံးပွုသူမြားအတှကျ mi cloud ကို 5gB ပေးပါတယျ အသုံးပွုတာ မြားလာရငျ ထပျတိုးပီး ပေးသှားတဲ့အတှကျ စိတျခလြကျခသြာ အကုနျလုံး ပုံအောထညျ့ထားပတေော့….ဘာမှအသုံးမပွုဘူးဆိုရငျလဲ တဈလကို 1gb တိုးတိုးပေးလို့ အဆငျပွပေါတယျ…..အမြားဆုံး 14gb အထိ ရပါတယျ....FIND MY DEVICEမိမိတို့ရဲ့ ဖုနျးလေး အထားမှားလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ သူမြားခိုးသှားလို့ပဲဖွဈဖွဈ ဘယျနရောကို ကိုယျ့ဖုနျးရောကျနတေယျဆိုတာ သိရအောငျ ဒါလေးကို အသုံးပွုကွပါတယျ…. ဖုနျးအတျောမြားမြားမှာလညျး နောကျပိုငျးမှာ ဒီစနဈက ပါလာပီမို့ အတျောမြားမြားလညျး သိကွမယျ ထငျပါတယျ……ဘယျလို set လုပျမလဲဆိုတာ အောကျမှာ ရှငျးပွထားပါတယျ….. ဒီစနဈကို အသုံးပွုမယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ဖုနျးနံပတျနဲ့ mi account ကို bind လုပျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ.. မလုပျထားရငျ အဆငျမပွပေါဘူး... သူထညျ့သုံးထားတဲ့ ဖုနျးနံပတျကိုပါ သငျ့ရဲ့ကှနျပြူတာကနေ သိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ...mi cloud>setting>find device>on.... setting ဆိုတာ တဈခု အပိုပါလာတာက dev rom 4.11.14 နဲ့ stable နောကျဆုံးဗားရှငျးတှပေါ ပါလာပါတယျ... တခွားဗားရှငျးဟောငျးတှဆေို setting မပါပါ.... ပီးရငျ ဖုနျးရဲ့ google location service ကို on ပေးထားရပါမယျ... pin lock သုံးရမယျ.... အဲဒါမှသာ ကှနျပြူတာကနေ i.mi.com ကို ဝငျပီး မိမိဖုနျး တညျနရောကို သိနိုငျမှာပါ... website ကို ဝငျပီး alarm ပေးတာ... lock လုပျတာနဲ့ data all wipe လုပျနိုငျမှာပါ...အဲဒီ့မှာ ကိုယျရဲ့ ဖုနျးထဲမှာ သုံးထားတဲ့ mi acc ကို ထညျ့ပီး မိမိဖုနျးရဲ့ တညျနရောကို သိနိုငျမှာပါ.... google location service ကို ထညျ့သုံးရငျ ဖုနျးအားကို ခြှတောတဲ့နညျးနဲ့ google acc sync မှာ location ကို device only ထားပါ အဲဒါကတော့ ဖုနျးပြောကျရှာဖို့တခုအတှကျပဲ location service ကိုသုံးတာမို့ ဘတျထရီသကျသာတာပေါ့……ကိုယျက ဖုနျးနဲ့ နီးတဲ့နရောကျို ရောကျလာပီဆို၇ငျ alarm ဖှငျ့လိုကျပါ... ဒါဆို ကျိုယျ့ဖုနျးအသံ ကိုယျကွား၇ပါပီ.......lock ကတော့ သူက ကိုယျ့ဖုနျးကို pin lock ခလြို့၇တယျ... ဒီအဆငျ့ကို သုံးဖို့ ကိုယျ့ဖုနျးက နဂိုကထဲက pin lock သုံးနပေီသား ဖွဈ၇မယျ...... တခွားလူက pin lock မသိတော့ ဖုနျးထဲ ဝငျသုံးလို့ မ၇.... wipe ကတော့ လုံးဝလကျလှတျဆုံးရှုံးပီလို့ ယူဆမယျဆို၇ငျတော့ ကိုယျ့ဖုနျးထဲမှာ သုံးထားသမြှ သိမျးထားသမြှကို ဖကျြတာပါ.... external sd card ကိုတော့ ဖကျြမပေးပါဘူး :-) ..... ဒီလောကျဆို သုံးလို့၇ပီ ထငျပါတယျ ဗြ........ အားလုံးကို သုံးဖို့ တခုလဲ လိုသေးတယျ ပြောကျသှားတဲ့ဖုနျးက အငျတာနကျရှိနဖေို့... အဲဒါမှ ကိုယျ့ဖုနျးကို control လုပျလို့ ၇မှာပါ.... အဆငျပွပေါစေ…
အရင်က ဒီတိုင်း ပို့စ်လေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပီး အောက်ရောက်သွားတာရော နှစ်ပတ်လည်တော့ ပြန်မရှာဖြစ်တော့တာရော.. အားလည်း အားနေတာရော ပေါင်းလို့ လျှာနည်းနည်းရှည်လိုက်ပါတယ်....
mi cloud ဆိုတာဘာလဲလို့ မေးရင်တော့ မိမိသိမ်းထားချင်တဲ့
contact, sms, photo, call log,
note, w-lan, recoder, browser history, music, download apps backup Home screen layout and
find my device စတာတွေကို သိမ်းလို့ မှတ်ထားလို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုပေါ့… အဲဒီ့ထဲမှာ သိမ်းဖို့ သင့်မှာ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?????
mi cloude ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်ကြိုက်တာ ၂ချက်ရှိပါတယ်…
၁။ wireless lan…… ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို ထည့်ထားသော wifi မှန်သမျှကို ဒါလေးသာ အွန်ထားလိုက် ဘယ်အချိန် ပြန်ဖွင့်ဖွင့် password ပြန် မတောင်းတော့ပါဘူး… factory restart ချလည်း မပျောက်ပါဘူး…(ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပီး)
၂။ download apps ကို save လုပ်ထားလို့ရလို့ပါ…..
စစချင်း အသုံးပြုသူများအတွက် mi cloud ကို 5gB ပေးပါတယ် အသုံးပြုတာ များလာရင် ထပ်တိုးပီး ပေးသွားတဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချသာ အကုန်လုံး ပုံအောထည့်ထားပေတော့….
ဘာမှအသုံးမပြုဘူးဆိုရင်လဲ တစ်လကို 1gb တိုးတိုးပေးလို့ အဆင်ပြေပါတယ်…..အများဆုံး 14gb အထိ ရပါတယ်....
မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းလေး အထားမှားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူများခိုးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာကို ကိုယ့်ဖုန်းရောက်နေတယ်ဆိုတာ သိရအောင် ဒါလေးကို အသုံးပြုကြပါတယ်…. ဖုန်းအတော်များများမှာလည်း နောက်ပိုင်းမှာ ဒီစနစ်က ပါလာပီမို့ အတော်များများလည်း သိကြမယ် ထင်ပါတယ်……
ဘယ်လို set လုပ်မလဲဆိုတာ အောက်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်….. ဒီစနစ်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပတ်နဲ့ mi account ကို bind လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်.. မလုပ်ထားရင် အဆင်မပြေပါဘူး... သူထည့်သုံးထားတဲ့ ဖုန်းနံပတ်ကိုပါ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
mi cloud>setting>find device>on.... setting ဆိုတာ တစ်ခု အပိုပါလာတာက dev rom 4.11.14 နဲ့ stable နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွေပါ ပါလာပါတယ်... တခြားဗားရှင်းဟောင်းတွေဆို setting မပါပါ.... ပီးရင် ဖုန်းရဲ့ google location service ကို on ပေးထားရပါမယ်... pin lock သုံးရမယ်.... အဲဒါမှသာ ကွန်ပျူတာကနေi.mi.com ကို ၀င်ပီး မိမိဖုန်း တည်နေရာကို သိနိုင်မှာပါ... website ကို ၀င်ပီး alarm ပေးတာ... lock လုပ်တာနဲ့ data all wipe လုပ်နိုင်မှာပါ... အဲဒီ့မှာ ကိုယ်ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ သုံးထားတဲ့ mi acc ကို ထည့်ပီး မိမိဖုန်းရဲ့ တည်နေရာကို သိနိုင်မှာပါ.... google location service ကို ထည့်သုံးရင် ဖုန်းအားကို ချွေတာတဲ့နည်းနဲ့ google acc sync မှာ location ကို device only ထားပါ အဲဒါကတော့ ဖုန်းပျောက်ရှာဖို့တခုအတွက်ပဲ location service ကိုသုံးတာမို့ ဘတ်ထရီသက်သာတာပေါ့……
ကိုယ်က ဖုန်းနဲ့ နီးတဲ့နေ၇ာက်ိုေ၇ာက်လာပီဆို၇င် alarm ဖွင့်လိုက်ပါ... ဒါဆို က်ိုယ့်ဖုန်းအသံ ကိုယ်ကြား၇ပါပီ.......
lock ကတော့ သူက ကိုယ့်ဖုန်းကို pin lock ချလို့၇တယ်... ဒီအဆင့်ကို သုံးဖို့ ကိုယ့်ဖုန်းက နဂိုကထဲက pin lock သုံးနေပီသား ဖြစ်၇မယ်...... တခြားလူက pin lock မသိတော့ ဖုန်းထဲ ၀င်သုံးလို့ မ၇.... wipe ကတော့ လုံးဝလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးပီလို့ ယူဆမယ်ဆို၇င်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ သုံးထားသမျှ သိမ်းထားသမျှကို ဖျက်တာပါ.... external sd card ကိုတော့ ဖျက်မပေးပါဘူး :-) ..... ဒီလောက်ဆို သုံးလို့၇ပီ ထင်ပါတယ် ဗျ........ အားလုံးကို သုံးဖို့ တခုလဲ လိုသေးတယ် ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းက အင်တာနက်ရှိနေဖို့... အဲဒါမှ ကိုယ့်ဖုန်းကို control လုပ်လို့ ၇မှာပါ.... အဆင်ပြေပါစေ…
By Tin Htay Ag on Saturday, July 18, 2015 at 10:29pm